Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Njem nleta Puerto Rico na -aga nke ọma ugbu a
Puerto Rico nwere pasentị kachasị elu nke ndị mmadụ gbanyere ọgwụ mgbochi zuru oke megide coronavirus na United States dịka Ọkt. 19, dịka data sitere na erslọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa. Ọ bụ nke a mere njem nlegharị anya ji na-eme nke ọma ebe a?
The US Travel Association's Iweghachite Dashboard nwere data sitere na Tourism Economics pụta ìhè Puerto Rico dị ka onye ndu na mgbake. Mgbe atụnyere mmefu ego kwa ọnwa, na nkezi, US dị ihe dịka 11% n'okpuru otu oge afọ abụọ gara aga na Septemba. Mana mmefu njem na Puerto Rico karịrị 23% karịa akara ahụ. Ọ bụ ezie na steeti US asatọ na-ahụ ọkwa mmefu ndị ọbịa n'elu 2019, ha sitere na 1% na 9% dị elu ebe mmefu ndị ọbịa Puerto Rico dị 23% karịa afọ abụọ gara aga.
Pasent 73% nke ọnụ ọgụgụ ndị Puerto Rico dị nde 3.3 ka agbanyere nje ahụ kpamkpam, dịka data CDC si kwuo. Ókèala US nwekwara otu n'ime ọnụego mgbasa ozi obodo COVID kacha dị ala na US, yana naanị mmadụ 18 enwetara ikpe n'etiti ndị bi na 100,000 n'ime ụbọchị asaa gara aga.
Usoro ndị a dị mma na-ebuli niche njem nke Island, ọ bụghị nke kacha nta bụ gọlfụ. Usoro ọmụmụ 18 nke Puerto Rico, osimiri, na ebe okpomọkụ ndị ọzọ emelitere dị mma maka izu ike na mmeghari n'oge ọdịda na oyi, mgbe okpomọkụ dị na 80s.
Golf na-aga nke ọma na Puerto Rico n'oge ọrịa a na-efe efe, na-esite na nchekwa dị adị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị na egwuregwu ahụ na agwaetiti ahụ. Ọmụmụ ihe sitere na okomoko ruo na ime obodo, gbasaa na Puerto Rico na ọtụtụ nso San Juan. Echiche dị n'akụkụ oké osimiri, osisi aki oyibo, na oké ọhịa vistas na-ahazi ntọala ha. Ọnụ ọnụ ahịa, ala, ụdị nhazi, na ihe eji enyere ndụ aka dị iche iche na mgbakwunye.
Agwaetiti ahụ bụ ọdụ ikuku nke Caribbean. Enwekwara omume enyi ọzọ na omenala asụsụ abụọ nke Puerto Rico, ego US, na enweghị paspọtụ achọrọ maka ụmụ amaala America.